Mufananidzo weiyo itsva Apple Watch Series 4 ine goridhe simbi yekupedzisa inosvinwa | Ndinobva mac
Mufananidzo weiyo itsva Apple Watch Series 4 ine goridhe simbi yekupedzisa inosvinwa
Zvinotaridza kuti network iri kudziya uye chifananidzo chakaburitswa chingave chinotevera Apple Watch modhi, iyo Series 4. Iyi Apple Watch modhi inotarisirwa kwazvooy ingave yekutanga Apple Tarisa nemhando nyowani yechidzitiro kumucheto uye microLED tekinoroji.
Kana tikatarisa iyo yemusoro wemusoro wechinyorwa chino tinogona kuona kuti Apple yagadzirira chitsva chesimbi kupera neyemhangura yegoridhe kupera iyo inosimbisa zvakare zvakare kuti mune inotevera Keynote Tichaona zvigadzirwa zvinoverengeka muvara regoridhe rakaratidzirwa muchiratidzo chinoonekwa pane kukokwa.
Apple inoita kunge isina zvese zvakavanzika uye ndeyekuti mufananidzo weiyo nyowani Apple Watch Series 4 yakaburitswa. Iyo ingave iyo vhezheni iyo ingave iine kugadziriswazve kwayo, zvese pamuviri uye pachiratidziri.
Mumufananidzo iwe unogona kuona kuti "korona" yakafungidzirwa uye denderedzwa repasi rakapendwa nepepuru yakawedzerwa kudzivirira iyo yekupedzisira tsvuku kara inoratidza chii chinonzi LTE vhezheni uye izvo hazvienderane nemusara wenguva.
Uye zvakare, isu tinogona kuona pasi pe "korona" yechipiri gomba iro raigona kuisa imwe maikorofoni kuitira kuti Walkie-talkie basa rishande zvirinani. Kana iri yechidzitiro, tinoona kuti yakakura kana kuti inoita kunge hombe kunyangwe iine saizi yakafanana. Izvo zvakaverengerwa nekuda kwekuti ivo vakamhanyira kumucheto kwemuviri wewachi.
Isu tinofungidzira kuti Apple Watch Series 4 ichasvika iine kuzvitonga kuzhinji uye tinotarisira kuti ichave ichiwanikwa muSpain kubva paminiti zero ... kana makambani efoni akabvuma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mufananidzo weiyo itsva Apple Watch Series 4 ine goridhe simbi yekupedzisa inosvinwa
Iwe unoziva nei vashandisi vasina kubvuma sezvakaratidzirwa muchinyorwa pamusoro penyaya yeLTE neApple Watch?
Kunyanya tichifunga kuti Orange yakaisa Esim muSpain nguva pfupi yadarika.
Tiri mumutsetse wepasi rose kuti tikwanise kutenga yakadaro ...
Imhosva here yeApple kana vanoshanda?
"Unganidza kutenderera", zano rakabudirira reKeynote iyo inowana zvibodzwa
Apple inotsanangura zviri mukati me2018 MacBook Pro yekuvandudza